နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ် ဝင်ငွေခွန် အများဆုံးပေးဆောင်ခဲ့သော မုတ္တမသဘာဝဓာတ်ငွေ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်ချီးမြှင့် | တိုတယ်အန်နာဂျီ(စ်)၏ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဆောင်ရွက်ချက်များ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ် ဝင်ငွေခွန် အများဆုံးပေးဆောင်ခဲ့သော မုတ္တမသဘာဝဓာတ်ငွေ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်ချီးမြှင့်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရသည် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ် အခွန် အများဆုံး ပေးဆောင်ခဲ့သူများအား ယမန်နေ့ ၁၀ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ က နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်တွင် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
အခမ်းအနားကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် တက်ရောက်၍ ဝင်ငွေခွန်၊ ကုန်သွယ်ခွန်နှင့် အထူးကုန်စည်ခွန် အများဆုံး ပေးဆောင်ခဲ့သူများအား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
မုတ္တမသဘာဝဓာတ်ငွေ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် ခေတ္တ အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးစိုးသောင်းမြင့်က ၂၀၁၈-၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ် ဝင်ငွေခွန် အများဆုံးပေးဆောင်ခဲ့သည့် ပုဂ္ဂလိက နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကို လက်ခံရယူခဲ့ပါသည်။
မုတ္တမသဘာဝဓာတ်ငွေ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ ဝင်ငွေခွန် အများဆုံးပေးဆောင်သူအဖြစ် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ စည်းကြပ်နှစ်မှ ယနေ့အထိ ခြောက်ကြိမ်ဆက်တိုက် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အခမ်းအနားကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဖြစ်ကြသော ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ ဦးမင်းသူ၊ ဦးစိုးဝင်း၊ ဦးသောင်းထွန်း၊ ဒေါက်တာအောင်သူ၊ ဦးအုန်းဝင်း၊ ဦးဝင်းခိုင်၊ ဒေါက်တာ သန်းမြင့်၊ ဦးဟန်ဇော်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
မုတ္တမသဘာဝဓာတ်ငွေ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် (၁၉၉၈) ခုနှစ်မှ စတင်၍ ရတနာကမ်းလွန် သဘာ ဝဓာတ်ငွေ့မြေမှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့များကို ၃၆-လက်မ ပိုက်လိုင်းဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တင်ပို့လျက်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ ယခုလက်ရှိတွင် နေ့စဉ် ကုဗပေသန်းပေါင်း (၆၆၀) ဝန်းကျင် (ထိုင်းနိုင်ငံဓာတ်ငွေ့ သုံးစွဲမှု၏ (၁၂) ရာခိုင်နှုန်းခန့်) ကို ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တင်ပို့လျက်ရှိပါသည်။
တိုတယ်အီးအန်ပီမြန်မာသည် တိုတယ်၏ အစုရှယ်ယာ (၃၁.၂) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် မုတ္တမသဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သူဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းတွဲဖက် လုပ်ဆောင်သူများဖြစ်သော Chevron Global Ventures (၂၈.၃) ရာခိုင်နှုန်း၊ PTTEPOI (၂၅.၅) ရာခိုင်နှုန်း၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (၁၅) ရာခိုင်နှုန်း တို့နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
မုတ္တမသဘာဝဓာတ်ငွေ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ ဝင်ငွေခွန် အများဆုံးပေးဆောင်သူအဖြစ် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ စည်းကြပ်နှစ်မှ စတင်၍ သတ်မှတ်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မုတ္တမသဘာဝဓာတ်ငွေ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ လူမှုရေးတာဝန်သိမှုကို ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် အဓိကမူဝါဒ တစ်ရပ်အဖြစ် ထည့်သွင်း ထားသည်။
၎င်းသည် စီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်နေသူများ အားလုံး၏ အကျိုးအတွက် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လိုက်နာစေမှု၊ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာများ၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ကျန်းမာ‌ရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခြေခံမူများဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံးစံနှုန်းများကို လိုက်နာကျင့်သုံးပါသည်။
မုတ္တမသဘာဝဓာတ်ငွေ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဒေသခံ ပြည်သူများအပေါ် ထားရှိသည့် ကတိကဝတ်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေရန်၊ ပညာရေး လက်လှမ်းမီစေရန်နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစွမ်းရည်များ တိုးတက်စေရန်၊ စွမ်းအင်ရရှိသုံးစွဲနိုင်ရန်၊ အသေးစားချေးငွေများ ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် စီးပွားရေး တိုးတက်မှုကို အားပေးရန် အစရှိသည့် အကြီးစား လူမှုစီးပွား အထောက်အကူပြု အစီအစဉ်များကို ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းဒေသအတွင်း (၁၉၉၅) ခုနှစ်မှ စတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့သည်။ ယင်းအစီအစဉ်များသည် ကျေးရွာ (၃၃) ရွာရှိ လူဦးရေ (၄၅,၀၀၀) ဝန်းကျင်ကို လွှမ်းခြုံအကျိုးပြုလျက်ရှိသည်။ ဤခုနှစ်များအတွင်း အဆိုပါ အစီအစဉ်များသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ လူမှုရေးတာဝန်သိမှုဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ရည်ညွှန်းကိုးကားဖွယ် ဖြစ်လာရုံမျှမက မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဖိုးတန် ပိုင်ဆိုင်မှု အဖြစ်ပါ သတ်မှတ်ခံထားရပါသည်။
မုတ္တမသဘာဝဓာတ်ငွေ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မြန်မာနိုင်ငံ သယံဇာတတူးဖော်ထုတ်လုပ်မှုများ ပွင့်လင်း မြင်သာမှုဖော်ဆောင်ရေး (MEITI) တွင်လည်း တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
President U Win Myint presents “Highest Income Taxpayer Award” to U Soe Thaung Myint, Acting General Manager of Moattama Gas Transportation Co., Ltd. (MGTC) at the ceremony held at Presidential Palace in Nay Pyi Taw on 10 August 2020. Photo: MNA
President U Win Myint poses foragroup photo together with businesspersons and officials from the Foreign companies that paid biggest taxes for 2018-2019 tax year in Nay Pyi Taw on 10 August 2020. Photo: MNA